यि हुन धूम्रपान गर्दा हुने चार असर | KhabarWay.com Nepali News
यि हुन धूम्रपान गर्दा हुने चार असर
२४ चैत्र २०७८, बिहीबार ११:३४
काठमाडौं, २४ चैत । धूम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । अत्यधिक धूम्रपानले तपाईंको फोक्सोलाई मात्र हानि गर्दैन, यसले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू पनि बढाउँछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार धूम्रपानले हामीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि कमजोर बनाउँछ । धूम्रपान गर्ने व्यक्तिमा फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यो रोगलाई खुलेर निम्तो दिनु जस्तै हो । धूम्रपान घातक छ किनभने यदि तपाईंले धूम्रपान गर्न छोड्नुभएन भने, तपाइँको शरीरमा क्षति हुन सक्छ ।
जान्नुहोस् जब कुनै व्यक्तिले धूम्रपान गर्छ भने उसको शरीरमा कस्तो असर पर्छ ।
१. मस्तिष्कमा असरः धूम्रपानले फोक्सोमा नराम्रो असर पार्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ तर धूम्रपानले मस्तिष्कमा पनि असर गर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । यसले तपाईंको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा अवरोध उत्पन्न गर्छ । यो प्रणालीले तपाईंको दिमागलाई असर गर्छ ।
निकोटिनले मस्तिष्कको स्नायुलाई पनि क्षति पु¥याउँछ । धेरै चुरोट पिउनाले मानिसको सोच्ने र बुझ्ने क्षमता कम हुन्छ। लामो समयपछि धूम्रपान छाड्दा पनि तनाव चिन्ता, डिप्रेसन जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
२. धूम्रपानले मुटुमा असर गर्छः चुरोटको अत्यधिक सेवनले मुटुमा असर गर्छ । धूम्रपानले सम्पूर्ण कार्डियोभास्कुलर प्रणालीलाई क्षति पु¥याउँछ । शरीरमा निकोटिनको प्रवेशले रक्तनलीहरू साँघुरो बनाउँछ ।
धूम्रपानको लत लाग्ने मानिसमा रगत जम्ने र रक्तचापको समस्या हुन्छ । यसले हृदयघातको जोखिम पनि बढाउँछ। पहिले नै हृदयघात भइसकेका व्यक्तिहरू उच्च जोखिममा पर्न सक्छन् ।
३. धूम्रपान पेटको लागि पनि खतरनाकः धूम्रपानले तपाईको पाचन प्रणालीलाई पनि हानि पु¥याउँछ । धेरैलाई यो थाहा छैन । जब तपाईं धूम्रपान गर्नुहुन्छ, निकोटिन तपाईंको मुख र घाँटीबाट तपाईंको पेटमा जान्छ । यसले कब्जियत, अपच, ग्यास, एसिडिटी, भोक नलाग्ने जस्ता धेरै समस्या निम्त्याउँछ । साथै मधुमेहको पनि खतरा हुन्छ ।
४. धूम्रपानबाट दाँतमा क्षतिः लामो समयसम्म अत्यधिक धूम्रपानले दाँतलाई असर गर्छ । यसले पिरियडोन्टाइटिस निम्त्याउँछ, जुन गिजाको गम्भीर संक्रमण हो । यी सबै बाहेक धूम्रपानले अन्य धेरै रोग निम्त्याउन सक्छ । धूम्रपान गर्दा शरीरमा ठूला परिवर्तनहरू आउँछन् र बिस्तारै निकोटिनको लत लाग्न थाल्छ । त्यसैले आफ्नो र आफ्नो परिवारको राम्रो स्वास्थ्यको लागि धूम्रपानबाट टाढा रहनुहोस् ।
स्वास्थ्यखबरबाट साभार ।